MAHAFINY Boeing 727-200 Advanced FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 50 941
Mpanoratra: Thomas Ruth, novaina tamin'ny BK
Nohavaozina taminy 06 / 03 / 2018: Nampiditra GPWS, Panel.cfg niova avy amin'ny alemana ho amin'ny teny anglisy, baikony madinika, nampiana 727 Performance, Procedures and Limitations PDF ao amin'ny lahatahiry dokam-barotra.
Nohavaozina taminy 04 / 09 / 2017: Ankehitriny mifanaraka Prepar3D v4, famoahana Auto-installer 10, dinamika sidina novolavolaina, azo tanterahina kokoa, fanjifana solika kokoa, mitombina feo tokana, radar toetr'andro.
Boeing 727-200 (Pax sy Fitaovam-piadiana) dia efa nianatra fiteny natokana ho an'ny fiteny FSX SP2 sy Fanafainganana. Tonga miaraka amin'ny tontonana 2D sy sôkôjia virtoaly miampy iray FMC miasa! Ahitana taratra roa: Pacific Air Express eflp ADVA RSBK (INS) ary HAPAG (FMC). Multiplayer mifanitsy amin'ny default. Ahitana koa fanavaozana maro. Vakio ny boky fampianarana.
Ny Boeing 727 dia ho ela be, ny kaompania malaza indrindra maneran-tany. Ny 727 Nanidina voalohany tao 1963.
Ny famolavolana ny 727 no vokatry ny marimaritra iraisana eo amin'ny United Airlines, American Airlines ary Eastern Airlines ny fanahafana ny mpandimby ny Boeing 707. United Airlines Te ho efatra noho ny voo seranam-piaramanidina amin'ny ambony haavony, indrindra fa ny hubs Stapleton International Airport. American Airlines te-maotera iray kambana fiaramanidina noho ny fahombiazan'ny ny antony. Eastern Airlines nanantena ho fahatelo noho ny maotera voo amin'ny Karaiba. Farany, nanaiky ny telo Airlines amin'ny trijet. Izao no teraka ny 727.
Posky Boeing 737-800 Mahay Airways FSX
Boeing C-32 Air Force roa USAF FSX & P3D